R/wasaare Saacid oo dhiirigilin u sameeyay ciidamo tababar ugu socdo Jasiira - calanka.com
R/wasaare Saacid oo dhiirigilin u sameeyay ciidamo tababar ugu socdo Jasiira (Calanka.com) - Posted at 28/04/2013 By Fantastic
Ra`isul wasaaraha Somaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa qaaday talaabo dhira gilin ah oo uu u sameeyay ciidamada cusub ee ku jira xerada tababarka Jaziira kuwaas oo tira ahaan lagu soo waramayaa in ay gaarayaan kun askari.
Waxaa lagu soo waramayaa in la gaarsiiyay ciidamadaas caddad geel ah oo muujineysa hadiyad uga timid wasiirka koowaad ee golaha wasiirada Somaliya Mr Saacid .
Arintaan ayaa looga gonleeyahay dhiira gilin loo sameynayo ciidamda oo ku jira tababar muddo fog qaadanaya , waxa ayna ilo wareedyo milateri sheegayaan in qeybta hore ee ciidamdaas in uu tababarka uu u soo dhamaanayo horaanta bisha soo socota .
Taliyaha dugsiga tababarka ee Jaziira gaanshaale Faandhe jaamc kaarshe ayaa arintaan ku tilmaamay mid dhiira gilin ah oo muujineysa in ciidamada ay dowlada ka war hayso .
Ciidamda ku jira xeradaas ayaa waxaa tababarka siinaya saraakiil Somaliyed iyadoo ay qaadanaayan casharo ku aadan habka dagaalka , jir dhis iyo anshaxa oo uu sii dheer yahay difaacidda wadaniyadda. Calanka.com: Isha wararka xaqiiqda